आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ माघ ११ गते शनिबार:: Mero Desh
आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ माघ ११ गते शनिबार
Published on: ११ माघ २०७६, शनिबार ०२:०४
विसं २०७६ माघ ११ गते शनिबार तदर्थ ई। स। २०२० जनवरी २५ तारिख, परिद्वी नामक संवत्सर, शाक: – १ ९ ४१, सूर्य उत्तर, शिशिर ऋतु, ने.सं. : – ११४०, (सिलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय: बिहान ०६:६५७ साँझ र सूर्यास्त: साँझ ०५:३६३६ बेलुका, इटहरी, सुनसरी,
नेपालमा सूर्योदय: बिहान ०६:४७४७ pm र सूर्यास्त: साँझ ०५:३० बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय: बिहान ०७:०३ साँझ र सूर्यास्त: साँझ ०५:४१ बेलुका, माघ शुक्लपक्षको प्रतिपदा तिथि, मध्यरात्रि फेरि ०३: बजे१ बेलुका, त्यसपछि द्वितीया तिथि, श्रवण नक्षत्र, मध्यरात्रि ०४:०३ बेलुका, त्यसपछि धमा विष्ठा नक्षत्र, चन्द्रमा मकर राशि (अहोरात्र बृद्धि), सिद्धि योग, मध्यरात्री ० ०२: ० ९ बेलुका, त्यसपछि व्यातिपात योग, चिसस्तुघ्न को, दिण्डसो ०२:५८० बेलुका बब्ब, अनन्दादि योग: स्थिर, चन्द्रवर्ण: कालो, चन्द्रमा: दक्षिण, समाजशास्त्र। : पूर्व, वर्शूल: पूर्व, आजको चाडपर्व र उत्सव: जगद्गुरु श्री बल्लभाचार्यको जन्मजयन्ती, ब्यानम लोहोतसर ÷ तामाङ ल्होचिचर, आजको महुहुर्त: द्रव्य ्रयोग वा लगानी,
एस मारेको फल पुनः प्राप्त हुन सक्छ। गुप्त्य ठेगाना पत्ता लगाउन जोडिएको समय छ। उद्योग र व्यवसाय विशेष फाइदाको समय छ। प्रतिस्पर्धी परास्तन्। सहयोगीहरू राम्रैसँग दिउँसो र काममा सोचेजसँग मिल्नेछ। नयाँ काममा ह्याउलर समय छ। थोरै निर्देशित पनि उत्तम फाइदा उठाउने सम्बन्धित छ। आजका लागि बधाई
भविष्यवाणीका लागि विशेष काममा जग बसाइक छ। सामाजिक उत्तरदायित्व हेननिंग समय छ। अनियमित काम भयो सम्भव हुनेछ। नयाँ काम र जिम्मेवारी ह्याड पार्ने अवसर छ। धार्मिक अनुष्ठान र परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बिट हुनेछ। मङ्ग्लिमेक्स कृतिम सम्पादन समय छ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभअ :्क: १ र शुभरङ्ग: बैजनी वा पहेंलो हो भने शुभकामना पछिल्लो वा यात्रामा जानुहोस् आजको कार्यक्षमता मन्त्र: ॐ भाग्यलक्ष्ममा नमः न्युनिम जापसिंग्: ११ पटक जप्री आरम्भ भएको प्राप्त हुनेछ।
मनमा कताकता अनुहार र डरले काम बाट स्थापना भएको हो, मान – उचित आदि पाइन्छ। परिवारजन पर्यावरणियता बढ्नेछ। प्रेम र मित्र बन्धन कसियर जानेछ। निर्देशित काम छोटो दूरी मा पूरा समय को समय फुर्सीदलो रहो। इच्छुक बढ्नेछ यदि रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न जोडिएको छ। व्यापार र उद्योगतर्फ फाइदाको योग छ।
विवाद, विवाद र सबै विजयी भिने छ। आशा सम्झौता सहयोग जुट्नो छन्। प्रयास प्रयास प्रयासमा सफलता सफलता प्रयास सफलता शुभचिन्तक सुझाव सुझाव पालना जब खुसी र उमङ्गको हुन्छ बन्नेछ। सुखद समाचारले बढि बढ्नेछ। व्यापार – व्यवसाय विशेष लाभ लिने समय छ। दाम्पत्य जीवन सुखद र समृद्धबाट हटाइन्छ। आजका लागि शुभअ शुभ्क: ३ र शुभर सु्ग: सुन्तले हो शुभ शुभकर्कर् शुभ शुभ शुभ पूर्व पूर्व वा यात्रा आज यात्रा पूर्व पूर्व कार्य आज आज आज आज कार्य आज आज आजन्त्रन्त्र कार्य आज आजन्त्र न्त्रन्त्रन्त्र कार्यन्त्रन्त्रन्त्र न्त्रन्त्रन्त्रन्त्रन्त्रन्त्र ॐॐन्त्रन्त्रन्त्रन्त्रन्त्र न्त्रॐन्त्रन्त्रक्षन्त्रन्त्रन्त्रन्त्र न्त्रॐन्त्रलक्षक्षन्त्र्मन्त्र ११ॐलललक्षक्षक्ष्म्यै्यै ११ ११ ११लक्षक्षक्ष ११्यै
त्रिक सम्पतिको सम्प सम्प सम्प सम्पतिकोतिकोतिकोतिको तिको सम्प पै सम्पतिकोतिकोतिको पै पढाईको समयमा समय पत्ता लगाउनुहोस् नयाँ ज्ञान सिक्ने ठाउँ छ। व्यापारमा सामान्य फाइदा हुनेछ। श्रमको सम्बन्धित मूल्यंङ्कन हुनेछ। आम्दानी सामान्य जस्तो ठूलो खाल्डो टर्नेछ। भविष्यवाणीका लागि विशेष काममा जग बसाइक छ। तत्काल ठूलो फाइदा भने नउठ्न हुन सक्छ। आजका लागि शुभअ :्क: २ र शुभरङ्ग: छुट्टे मर्मे बुट्टे हो भने शुभकामना पछिल्लो वा यात्रामा जानुहोस् आजको कार्यक्षमता मन्त्र: ॐ अश्विनीकुमाराभ्यं नमः न्यूनतम जापानी: २१ पटक जप्री आरम्भ भएको हुन्छ।
आज समुदायको होमा राम्रै काम गर्न जोड्न छ। सामाजिक उत्तरदायित्व हेनपेड फाइदा काम र जिम्मेवारी ह्याड पार्ने स्थान छ। तपाईंको क्षेत्रको हाडलागी हुनेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। स्थापना कश्केक छ। सहयोगीहरु संग दिनुहुन्छ। तथ्या काम्क काम पनि सहजिल सम्पादन हुनेछ। उद्योग र व्यापार विशेष फाइदा मिल्नेछ।
राम्रै फाइदाको योग छ। विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुन्छ। विशेष सामग्री – तर आज गरेको श्रमको मूल्य मात्र पाइनेबाट आउँदछ, केही समयको लागि आशाको भरि भरमा पर्दा हुन सक्छ। स्वास्थ्य सबै रहन्छ काम गर्नका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। जिम्मेवारी भने बढ्दैछ। बाध्यता पूर्ण काममा समय बिट्न सक्छ। आजका लागि शुभअ शुभ्क: ८ र शुम्बरङ्ग: गाढा रात हो तर कुनै खुशीकमको अघि वा यात्रामा जानुहोस् आजको कार्यक्षमता मन्त्र: ॐ नमस्कार्डिकायै न्युनिम जापसिंग्: ० ९बल जप्री आरम्भ गरिएको प्राप्त भयो।
अनावश्यक कामलाई फेरि सुरु हुने मिल्नेछ। सहयोगीहरू अप्रत्याशित ढले्गले मद्दत गर्दछन् अर्जित धन सञ्चालन वा लामो समयिक प्रयोजन। पुरानो समस्या र कटिलीयन सावधानी अपनाउने कार्य र आत्मबलिकाको कारण समाधान समाधान छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमता बढ्दो छ। हक र अधिकारको संरक्षण गर्नुहोस्। आजका लागि बधाई
केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ। वैदेशिक कामकाजमा फाइदादारी। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुन योग छ। टाढाको यात्रा गर्दै छ। दिगो फाइदा हो काममा लगानी बढाउन जोडिएको छ। परिवारजन र करकुट्टुम्बका बीचमा सुन्धुरा सम्पर्क हुन्छ। अनुकूल स्थानान्तरण र तालुका यात्राको सम्मेलन छ। आजका लागि शुभअ शुभ्क: ६ र शुभरङ्ग: सेतो वा सत्यलो हो भने शुभकामना पछिल्लो वा यात्रामा जानुहोस् ।
आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्दछ। काम कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। श्रमको मूल्य मूल्यांकनङ्कन गर्नुहोस्। नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् योग छ। पढाइमा प्रगति हुनेछ। आयआर्जन बढ्नो र उठाउनुहोस् रकम ह्याडलागीको समय छ। कृषि र पशुपालनमा डुब्ने व्यवसायमा प्रशस्त फाइदा हुन योग छ। पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाइएको छ। आजका लागि शुभअ शुभ्क: ५ र शुभर हल्ग: हलुवा रोटो हो तर कुनै शुभकर्म हुन अघि वा यात्रामा जानुहोस् आजको कार्यक्षमता मन्त्र: ॐअन् अङ्ग्गरकाय नमः न्युनिम जापसिंग्: १० पटक जप्री आरम्भ हुँदा प्राप्त हुनेछ।
बाह्रौं भावमा चन्द्रमा भए पनि अटलिलाई हाल्नु थप परिस्थिति हुन सक्दैन। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ उठाउने अवसर छ। हरदम सचेत र सतर्क रहनु, नत्र समय होस नपुग्सा हुनै लाग्ने आम्दानीमा बाधा पुग्न हुन सक्छ। शत्रु र प्रतिस्पर्धिको चलखेलिले सगी्गीसाथीको मद्दत तोड्न सफल भिएने छ। होसियारीसाथ काम लिनु कनेक्ट समय छ। आजका लागि शुभअ शुभ्क: ८ र शुभरङ्ग: गाढा चलनेलो वा बुट्टे हो तर खुशीको काम अघि जानु वा यात्राको लागि जानुहोस्।
नयाँ काम र जिम्मेवारी ह्याड पार्ने अवसर छ। धार्मिक अनुष्ठान र परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बिट हुनेछ। मङ्ग्लिमेक्स कृतिम सम्पादन समय छ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। धेरै तिरिफ भयो कीर्तिमानी काम सम्पादन हुन सक्छ। स्थापना कश्केक छ। घर – गृहस्थीमा केही समस्या आउने सम्भावना देखिन्छ। आजका लागि बधाई
(द्रष्टव्य: यो पञ्चाङ्गको सूर्योदय, सूर्यास्त, तिथि, नक्षत्र, योग, आदि आदि समस्याहरू समदित इटहरी, सुनहरे, प्रदेश नन्। ०१, नेपालको अक्षांश, देश र र नेपालको नियम राष्ट्रिय समय मानी सूर्य घटनाको प्रयोग भएको छ, पर्याप्त मात्रामा लेखिएको छ चंद्रको) दैनिक गति, चन्द्रमा थप शनि र बृहस्पति केवल दृष्टि, वेधस्थान र विपरीत वेधस्थान भेटेको छ)